Le nkampani ngesikhathi imisebenzi yezomnotho akuyona nje umthengi impahla kanye izinto, kodwa futhi nomthengisi izimpahla ezivezwa umkhiqizo noma isevisi enikeziwe. Kulesi simo, zikhona njalo zasemizaneni abathengi kanye namakhasimende, kokubili endabeni ukudayiswa amasevisi, uma ukuthengwa kwezimpahla.
Kule ndaba, kukhona izinhlobo eziyisisekelo izibalo nge abathengi kanye namakhasimende:
1.Oplachivayutsya ngomsebenzi ngempela owenziwe futhi wakhulula tovary.V Kulokhu, namadokumende asekelayo lapho imisebenzi evulekile abazenzi - noma Sales-invoyisi, invoyisi noma isenzo ukwamukela umsebenzi owawenziwa, kakhulu kuyaqabukela isetshenziselwe enye into, kodwa kwaba njalo endabeni ka izinkokhelo ngabanye lokhu ubuso kungenzeka kakhulu imali futhi (noma) irisidi.
izinkokhelo 2.Avansovy (ukukhokha kusengaphambili) for the kwezidingo nezikhulumi umsebenzi ephumelela kangcono. Ukusekela mibhalo sluchayah- inkontileka noma invoyisi.
Isisekelo ukubonakalisa izibalo nge abathengi kanye namakhasimende accounting - a izitatimende zasebhange. Phakathi isamba etholakele umthengi futhi uyasho ukuthi akhawunti asebhange (amarekhodi asebhange uku "Loan"), njengoba kubonakala kula ezimali provodkovoy igrafu ku-akhawunti ye-akhawunti debit nama-credit "kwaBantu abathengi kanye namakhasimende" .Predoplata, okuyinto etholakala kwi i-akhawunti ye-inkampani basuke okumele zikhokhelwe kumakhasimende. Nale lemali VAT uyikhokhe njengemali inkokhelo phansi likhona oborou intela. Ukubalwa kwentuthuko akhawunti 681 "Settlement kwentuthuko wathola" (Uma njalo "Khetha Advance" kusethelwe ku- "Yebo").
Empeleni, lo indlela eyisisekelo, khomba nemizana namakhasimende, kodwa kuze kube izidingo ikhasimende zahlukahlukene ngempela futhi ngokuvamile go nangale kwemingcele ezivamile. Kodwa naphezu kwalokhu, ngokuqondene ngokwakho inkampani kumelwe senze konke ukuze i-akhawunti lomthengi ngeke ezingeni eliphezulu kakhulu. Ikakhulukazi ngoba i-akhawunti kanye abathengi kungaholela nohlelo olukhethekile, okuyinto lula kakhulu futhi isheshisa inqubo futhi inikeza amathuba angeziwe. Ngenxa isimiso esinjalo ukuhweba igcina egciniwe, okuzenzakalelayo yokuthengisa imisebenzi, ngezezimali kanye neminye iminyango, futhi ezinye izinjongo, ezifana enemininingwane amarekhodi kwezibalo, ungalungiselela ezengeziwe Uhlelo optsiey.Obychno ukusetshenziswa 1c noma efanayo.
Ukuze noma iyiphi inkampani, ikakhulukazi nge inzuzo enkulu, inkinga nakakhulu ukugcina ithrekhi proplat.Est ngesikhathi esifanele ongakhetha eziningi ezahlukene ukulawula schetov.Programmoy akhokhe ngokwakho kunquma ukuthi amaqiniso kwemali - abhadalela izimpahla ezithengisiwe (imikhiqizo) noma njengenhlangano kusengaphambili ukulethwa elilandelayo. Izinqumo zenziwa ikhumbula ngesisekelo sokukhokhelwa ibhalansi kokuhlahlela counterparties ethize kanye oda.
Uma counterparties ngemiyalo yezikhulu inani Receivables, lo mnikelo wathola iphathwa njengendlela yokukhokha ku-akhawunti buyiselo walabo izikweletu, ngaphandle kwalokho isimo - njengoba predoplaty.Esli wathola isamba lidlule inani ezikweletini noma ukungabi khona izikweletu, bese ingxenye wathola imali noma yonke imali loan okukhulunywe akhawunti 681 (Kuleso simo, uma kuhlonzwa ukuthi njalo "Khetha kusengaphambili"). , Kwamiswa Uma inkokhelo kusengaphambili intela intengo ungeze wiring is ku-akhawunti debit 643.V jikelele, isiphetho phakathi umthengi kanye ikhasimende Kwenziwa ekulandiseni "kwaBantu abathengi kanye namakhasimende" (in umongo umthengi (ikhasimende) (subkonto "Counterparty") kanye nezincwadi -Ordering (subkonto "Order")).
Izimali engenayo evela ukuthengiswa umkhiqizo osuphelile, ethengwayo Akuthengiseki kabusha, amasevisi e-akhawunti inkampani efanele "Income kusukela yokuthengisa": "Isivuno kusuka ukuthengiswa umkhiqizo osuphelile", "Income kusukela ukuthengiswa kwempahla", "Isivuno kusukela ukudayiswa imisebenzi kanye nezinsizakalo" .Given lasebhange "izindleko yokuthengisa" akhawunti kubonise izindleko zokukhiqiza imikhiqizo adayiswa, imisebenzi kanye nezinsizakalo, khona-ke kukhona izindleko langempela kwezimpahla ithengiswe. Uma ukucupha izindleko kwemibiko kuqhutshwa ngaphandle kokusebenzisa akhawunti Kwekilasi 9 (endaweni ngokuvamile njalo "Ukuze usebenzise i-akhawunti ngezindleko" kusethelwe ku- "kuphela Ibanga 8"), izindleko yokuthengisa lizokhokhiswa ngokushesha ku-akhawunti 791 "Imiphumela yomsebenzi eziyisisekelo."
Ukusebenzisa izinhlelo ezishintshayo, okuyinto eyenziwa izibalo nge abathengi kanye namakhasimende yinqubo Okuvamile ethafeni namuhla, futhi sibonga ukunemba umakhalekhukhwini, ukuvumela ukuxazulula cishe kunoma iyiphi ingxabano eqhamuka.
Lwezezimali imvelo Macro futhi imvelo yangaphakathi
Njengoba kuboniswe kokusele Receivables
Beet abilisiwe - nje kuphela esiphundu, kodwa futhi ewusizo
Amachashazi Atomic: umlando indalo, isithombe
Ingabe Smartphones Russian ukuze sinqobe izwe?